दुई दर्जन ठेकेदार पनि चुनावी मैदानमा, को-को हुन् ? « Naya Page
दुई दर्जन ठेकेदार पनि चुनावी मैदानमा, को-को हुन् ?
काठमाडाैं : निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारीमा संलग्न कम्तीमा दुइै दर्जन व्यवसायीलाई दलहरुले चुनावी मैदानमा उतारेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको सुचीअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी २३ व्यवसायी उम्मेदवार बनेको छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
निर्वाचन मिति घोषणापश्चात् २३ निर्माण ब्यवसायी चुनावी मैदानमा उत्रेको पहिचान भएको छ, महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने, सबैको सोधखोज गर्दैछौं, ४० जना निर्माण व्यवसायी चुनावमा उठको अनुमान छ ।
महासंघको सूचीअनुसार ११ व्यवसायी प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले चुनावी मैदानमा उतारेको छ । उनी चितवन ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रत्याशी बनेका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भिड्दै छन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्यलाई कांग्रेसले रसुवाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ उठाएको छ ।
सोही क्षेत्रबाट सूर्य–चन्द्र कन्स्ट्रक्सनका जनार्दन ढकाल एमाले कोटाबाट चुनावमा उठेका छन् । यहाँ दुई निर्माण व्यवसायीबीच टक्कर हुँदै छ ।
धादिङबाट दिलमान पाख्रिन पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन् । कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सनका तीर्थ लामा कांग्रेसकै कोटाबाट काभ्रे १ मा प्रतिनिधिसभामा उठेका छन् । यसैगरी सप्तरीमा कांग्रेसका तर्फबाट हरिशप्रसाद महतो प्रतिनिधिसभाका लागि नै भिडदै छन् ।
अछामबाट भरतकुमार स्वाँर प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन् । मनाङबाट म्यानपावर/निर्माण व्यवसायमा संलग्न टेकबहादुर गुरुङले कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । पर्सा ३ मा समाजवादी फोरमबाट हरिनारायण रौनियार उम्मेदवार छन् भने जयप्रसाद ठाकुर सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभामा उठेका छन् । कांग्रेसले सबैभन्दा बढी व्यवसायीलाई उठाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी कम्तीमा १४ जनालाई कांग्रेसले टिकट दिएको छ । एमालेका तर्फबाट ३ जना उठेका छन् । अन्य दलबाट ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रदेशसभामा काभ्रेबाटै गणेश लामा र चन्द्र लामा चुनावी मैदानमा छन् । गणेश कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् भने चन्द्र एमालेका हुन् । विवादास्पद छवि भएका गणेश विजयकुमार गच्छदारसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । प्रदेशसभामा स्याङ्जाबाट राजु थापा, दैलेखबाट दिक्पल शाही, भक्तपुरबाट अंगद खडका, मकवानपुरबाट इन्द्रबहादुर बानियाँ छन् । यी सबै कांग्रेसबाट टिकट पाउने व्यवसायी हुन् । सुर्खेतमा खडकबहादुर खत्रीले एमालेबाट टिकट पाएका छन । बैतडीमा प्रदेशसभाका लागि गणेश चन्दले राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष जिपछिरिङ लामालगायत केही व्यवसायी दलहरूको सांसद छान्ने समानुपातिक सूचीमा छन् ।
व्यवसायी/कम्पनी क्षेत्र पार्टी प्रतिनिधिसभा/प्रदेश
विक्रम पाण्डे/कालिका कन्स्ट्रक्सन चितवन– ३ राप्रपा प्रतिनिधिसभा
जनार्दन ढकाल/सूर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन रसुवा एमाले प्रतिनिधिसभा
दिलमान पाख्रिन धादिङ –२ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
मोहन आचार्य/रसुवा कन्स्ट्रक्सन रसुवा कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
तीर्थ लामा/कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सन काभ्रे–१ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
छत्रबहादुर बम्जन सिन्धुली–२ कांग्रेस प्रदेश
गणेश लामा/सिरुवा कन्स्ट्रक्सन काभ्रे–१ ख कांग्रेस प्रदेश
चन्द्र लामा/लामा प्रगति निर्माण सेवा काभ्रे–१ ख एमाले प्रदेश
हरीशप्रसाद महतो/ए क्लास कन्स्ट्रक्सन सर्लाही–३ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
राजु थापा स्याङ्जा–१ कांग्रेस प्रदेश
पूर्णबहादुर तामाङ/कन्चराम कन्स्ट्रक्सन रापेछाप–२ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
जिपछिरिङ लामा/लामा कन्स्ट्रक्सन दोलखा–१ – समानुपातिक
भरतकुमार स्वाँर/स्वाँर कन्स्ट्रक्सन अछाम–१ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
दिक्पाल शाही दैलेख (प्रदेश ख) कांग्रेस प्रदेश
अंगद खडका भक्तपुर कांग्रेस प्रदेश
पुष्पा शाह अछाम कांग्रेस समानुपातिक
वीरेन्द्र ब. कनौडिया – – समानुपातिक
हरिनारायण रौनियार/पप्पु कन्स्ट्रक्सन पर्सा–३ समाजवादी फोरम प्रतिनिधिसभा
टेकबहादुर गुरुङ मनाङ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
इन्द्रबहादुर बानियाँ/लटिनाथ निर्माण मकवानपुर–२ कांग्रेस प्रदेश
खड्गबहादुर खत्री प्रदीप कन्स्ट्रक्सन सुर्खेत–१ एमाले प्रदेश
गणेश चन्द/प्रमोद कन्स्ट्रक्सन बैतडी (ख) राप्रपा प्रदेश
जयप्रसाद ठाकुर सप्तरी स्वतन्त्र प्रतिनिधिसभा